Degmada Fiiq Iyo Kulan Balaadhan Oo Ay Kasooqaybgaleen Dhalinyarada Heego |
Fiiq (estvlive) 10/05/2018
Waxaa xarunta gobolka erer ee magaalada fiiq kaqabsoomay kulan balaadhan oo ay kasooqaybgaleen dhamaan dhalinyarada heego ee kudhaqan degmada fiiq islamarkaana ujeedadiisu tahay sii xoojinta horumarka nabagalyada, nidaamka dib ucurashada iyo waliba maamulka suuban. Iyadoo kulankan ay shirgudoominaysay Wasiirka Xafiiska Maaliyada Iyo Horumarinta Dhaqaalaha DDSI oo uu waheliyo Komishinerka Komisionka Anshaxa Iyo Kahortaga Musuqa DDSI.
Hadaba, kulankan ayaa waxaa furitaankiisii kahadlay Wasiirka Xafiiska Maaliyada Iyo Horumarinta Dhaqaalaha DDSI Marwo Fartuun Cabdi Mahdi Oo ugu horayn u mahadcelisay dhamaan dhalinyarada kasooqaybgashay kulankan islamarkaana si qoto dheer uga warbixisay nidaamka dimuqraadiyadeed ee dalka, horumarka dhinacyada badan ee kahirgalay deegaanka 10 kii sano ee u danbaysay iyo waliba faaiidooyinka ay kentaay dib ucurshadu. Wasiirada oo hadalkeeda siiwata ayaadhalinyarada kuboorisay in shaqsi kastaa oo kamdi ah dhalinyarada heego uu masuul kayahay ilaalinta deegaankiisa systemkiisa iyo waliba siidii uu uga qaybqaadan lahaa waxkasta oo lagusii adkaynayo horumarka nabadgalayada iyo maamulka suuban ee uu deegaanku helay 10 kii sano ee udanabaysay.
Sidookale, Komishineerka Komishinka Anshaxa Iyo Kahortaga Musuqa Mudane Maxamuud Cabdiqaadir Maxamuud oo isna kulankan kahadlay ayaa sheegay in ay dhalinyaradu tahay cududa ugu muhiimsan ee uudeegaanku leeyahay islamarkaana dhalinyarto heego ay yihiin kuwo utaagan horumarka nabadgalayada iyo maamulka suuban ee kahirgalay dhamaan deegaanka.
Dhankakale, dhalinyarada heego ee degmada fiiq oo kulankan kahadashay ayaa sheegay in deegaanka soomaalida itoobiya uu toban sano kahor ahaa deegaan aysan nololi kajirin haday kajirtayna ay silac iyo saxariir ahayd. Maadaamo uu deeganaku 10 sano kahor ahaa mid uusan kajirin horumar iyo nabadgalyo laiskuhalaynkaro. Waxayna dhalinyaradu sheegin in aan laqiyaasi Karin isbadalka baaxada way nee deegaanka kadhacay 10 kii sano ee u danbeeyay. Waxayna balan qadeen in dadaaladaas loogalay deegaanka ay difaacayaan islamarkaana ay garabtaaganyihiin xukuumada iyo XDSHSI waxkasta oo lid ku ahna ay ka difaacayaan.
Sidookale, degmada boqolmaayo ee katirsan Gobolka Liibaan ayaa waxaa iyana kadhacay kulan balaadhan oo ay kasooqaybgaleen dhalinyarada Heego ee kudhaqan degmadaasi, islamarkaana lagu qaadaadhigayay sii xoojinta horumarka baaxada wayn, nabadgalayada dib ucurashada iyo maamulka suuban ee deegaanka kahirgalay. Iyadoo halkaasna uu dhalinyarada kulahadlay gudoomiyaha gobolka liiban mudane Cabdi Xuseen Cali islamarkaana dhalinyarada heego ee degmada boqolmaayo kubooriyay in doorkooda ay kaciyaaraan kaqaybqaadashada horumarkan balaadhan ee deegaanka kasocda iyo waliba nabadgalayada islamarkaana ay kahortgaan waxkasta oo lid kuah horumarka iyo nabadgalayada deegaanka.
Iskusoowada duuboo, dhalinyarada heego oo ah urur dhalinyaro oo madaxbanaan islamarkaana iskood isu aasaasay ayaa ah dhalinyaro kajirta dhamaan 11ka Gobol, 93 degmo iyo 6da maamulmagaalo ee uudeegaanka soomaalidu ka koobanyahay. Iyadoo dhalinyaradani ay yihiin kuwo iyagu wacad kumaray ladagaalanka fikirada cidhiidhyoon iyo sidii ay udifaaci lahaayeen waxkasta oo dhib u keeni kara Af iyo Adinba horumarka, nabadgalyada iyo maamulka suuban ee ay ku naanloonayaan shacabwaynaha DDSI.